आइजीपीको छोरामाथिको जाहेरीमा अदालतको कारण देखाउ आदेश-NepalKanoon.com
आइजीपीको छोरामाथिको जाहेरीमा अदालतको कारण देखाउ आदेश
भदौ १, पोखरा । मणिपाल हस्पिटलका प्रशिक्षार्थी डाक्टर अनिमेष ठाकुरको मृत्यु हत्या वा दुर्घटना के हो भन्ने बुझ्नका लागि परिवारले दिएको किटानी जाहेरी प्रहरीले लिन नमानेको विषयमा पुनरावेदन अदालत पोखराले प्रहरी प्रशासनसँग जवाफ मागेकोछ ।
डा. गरिबदास ठाकुर
अनिमेषको मृत्युपछि परिवारले प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालका छोरा डा. आयुषको नाममा दिइएको किटानी जाहेरी प्रहरीले लिन नमानेपछि ठाकुर परिवार अदालत गएको हो ।
आफूसँग विकल्प केही नरहेपछि जाहेरी नलिएको भन्दै अनिमेषका पिता गरिबदास ठाकुरले जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयविरुद्ध पुनरावेदन अदालत पोखरामा रिट दायर गरेका थिए । अदालतले २९ साउनमा यसबारेमा बहस गरी १५ दिनभित्र जवाफसहित उपस्थित हुन विपक्षीका नाममा आदेश दिएको छ ।
प्रहरी महानिरीक्षक अर्यालका छोरा आयुष र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव डा. गरिबदास ठाकुरका छोरा अनिमेष सहपाठी र घनिष्ट मित्र थिए । उनीहरूकै मिल्ने साथी डा. प्रतिसा बस्ने घरको छतबाट खसेर १९ असारमा अनिमेषको मृत्युपछि परिवारले अनुसन्धान गर्न माग गरिरहेको छ ।